दम्पतीबीच खटपट भइरहन्छ ? यसो गरौं - Internet Khabar
November 23, 2017 July 28, 2018 Internet Khabar
पती-पत्नीबीच कहिले कही मनमुटाव हुन्छ । कति कुरामा विमति हुन्छ । भनाभन हुन्छ । झगडा हुन्छ। पारिवारिक जीवन चलाउने कुरामा यस्ता खटपट हुनु सामान्य हो । तर, यो क्रम पटक पटक दोहोरिन्छ भने त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । पति-पत्नीबीच उत्पन्न यस्ता मतभेतले क्रमस दुबैको सम्बन्धलाई चिरा पार्दै लान्छ । र, यो क्रम जारी रह्यो भने दाम्पत्य जीवन नै तहसनहस हुनसक्छ ।
November 23, 2017 July 28, 2018
कानबाट किन आउँछ पिप र रगत ? यस्तो छ समाधान
December 25, 2017 December 29, 2018